युट्युवमा फल्छ पैसा | मेरो कलम
– सन् २००५ मा स्थापना भएको युट्युव डटकम एलेक्सा ¥याङकिङमा उत्कृष्ठ तेश्रो स्थानमा छ । ईन्टरनेटमा भिडियो सम्वन्धी काम सजिलै गर्न सकियोस भन्ने उदेश्यले चाड् हर्रे, स्टिभ चेन,जावेद करिमले युट्यूव डटकमको स्थापना गरेका हुन् । विशुद्ध भिडियो सम्वन्धी काम गरिरहेको युट्युव निकै चर्चित वन्यो र वन्दैगईरहेको छ । स्थापनाको १ वर्षपछि अर्थात सन् २००६ मा गुगलले १ दशमलव ६५ विलियन डलरमा युट्यूव खरिद ग¥यो । नयाँ सोच, परिकल्पनाको कारणनै सस्थापकहरुले एक वर्षमै विलियन डलर कमाउन सफल भए । खरिद गरिसकेपछि गुगलले युट्युवलाई धेरै परिस्कृत वनाउदै गईरहेको छ । युट्युववाट गुगलले मात्रै नभई प्रयोगकर्ताले समेत प्रतक्ष्य लाभ लिईरहेका छन् । हरेक सेवासगै आर्थिक सुविधापनी गुगलले जोड्नेहुदा प्रयोगकर्तामा उल्लेख्य वृद्धि भईरहेको छ ।
युट्युवको अभिभावक गुगल विश्वमा हेरिने बेवसाईटमध्ये पहिलो स्थानमा रहेको हालैको एलेक्सा ¥याङकिङमा उल्लेख छ । भिडियो सम्वन्धी रहेर काम गर्ने धेरै बेवसाईहरु छन् तर युट्वजस्तो कम ईन्टरनेट गतीमा पनी चलाउन सकिने अपलोड,सेयर तथा ट्यागका विषयमा सहज रहेको पाईदैन । १८ वर्षदेखी ५४ वर्ष उमेर समुह सम्मका मानिसले चलाउन सक्ने युट्युवमा ४८ घण्टासम्मको भिडियो अपलोड भएको छ । क्रमस नेपालमा पनी मानिसहरु आफ्नो कामकाज, भ्रमण, भेटघाट एवं दैनिक नित्यकर्मलाई भिडियोमा कैद गदै युट्यूवमा अपलोड गर्ने र आफ्ना आफन्त साथीभाईलाई देखाउने चलन वढेको छ । अपलोड,ट्याग र सेयर भन्ने नाराका साथ प्रयोगकर्तालाई युट्यूव विविध सुविधा पनी दिईरहेको छ । नेपालमा पनी युट्युवको माध्यमवाट भिडियो व्लगीङ गर्नेहरु धेरै छन् जसवाट राम्रो पैसा कमाईरहेका छन् । उनिहरु भन्छन् सवैभन्दा राम्रो कमाई भनेकै भिडियो व्लगीङमा छ । युट्युववाट अन्य श्रोतवाट भन्दा वढी कमाई हुनेगरेको वताईन्छ । गुगलले समेत कुल कमाईको ४० प्रतिशतभन्दा वढी कमाई युट्यूववाट नै गर्दैआईरहेको वताएको छ । पैसा त जो कोहि पनी चाहन्छन् तर युट्युववाट कसरी सुरक्षित तरिकाले कमाई गर्ने भन्ने विषयमा विशेष ध्यान दिन आवश्यक छ । युट्युववाट कमाई गर्नको लागी एडसेन्स एकाउण्ट हुन आवश्यक छ । एड्सेन्स गुगलकै विज्ञापनदाता कम्पनी हो । एडसेन्स डटकममा नाम,ठेगाना लगायत अन्य जानकारी राखेर एकाउण्ट वनाउन सकिन्छ । एड्सेन्सको विज्ञापन व्लग,बेवसाईट,युट्युव,जिमले लगायतमा प्रयोग गरिन्छ । सो विज्ञापन युटयु्वमा प्रयोग गर्नको लागी युट्युव एकाउण्ट सक्रिय हुन आवश्यक छ । गुललकै एकाण्टले युट्युवको एकाउण्टपनी सक्रिय गर्न सकिन्छ । अपलोड गरिदै गरिएको भिडियो कस्तो प्रकारको भिडियो हो ? धेरैभन्दा धेर्रै युट्युव प्रयोगकर्ताले मन पराउछन् कि पराउदैनन ? यस विषयमा सोच्न जरुरी छ । युट्यूवमा विशेषत कमेडी तथा क्यारिकेचर त्यस्तै म्युजिक कम्पनी तथा व्याण्डले अपलोड गरेका गीत सगिंतका भिडियोहरु धेरै भन्दा धेरै हेरिएको पाईन्छ भने जति धेरै हेरियो उतिनै पैसा कमाई गरिरहेका हुन्छन् ।
विशेषत वढी मानिसहरु युट्युववाट मनोरञ्जन चाहन्छन् । त्यस्ता चर्चित भिडियोले पैसा कमायो भनेर युट्यूवमा अपलोड भईसकेको भिडियोलाई पुर्न प्रयोग गर्नु राम्रो हाईन किनकी , कपिराईटको अधिकार सुरक्षित गरिएको भिडियो पुर्न युट्यूवमा राखियो भने एड्सेन्स एकाउण्ट गुम्ने खतरा वढेर जान्छ । युट्यूव प्रयोगको सुरुवाती समयमा पन्ध्र मिनेटसम्मको भिडियो अपलोड गर्न स्विकृती दिनेहुनाले छोटो समय अवधीको भिडियो वनाउनुपर्दछ । विज्ञापन राख्नको लागी मोनिटाईजेशन पाएको हुनुपर्दछ । भिडियोमा विज्ञापन राख्नको लागी युट्युव सेटिङमा मोनिटाईजेशन विथ एड्स बटम पाउनुहुनेछ । विज्ञापन राखिसकेपछि सो भिडियो कस्तो हो युट्यूवले अध्ययन गर्ने काम गर्छ र योग्य छ भने सो भिडियोमा विज्ञापन देखाउन थाल्छ । अपलोड गरिएका धेरै भिडियोमध्ये आफुलाई मन लागेका भिडियोमा मात्र विज्ञापन राख्न पनी सकिन्छ । अपलोड गरिएको भिडियोका अवस्था कस्तो छ ? ईमेल एकाण्टमा सो सम्वन्धी रिपोर्टहरु पठाउने काम गर्छ । युट्यूववाट भिडियो ब्लगिङ गर्नेहरुको भनाईमा उत्कृष्ठ भिडियोहरु निरन्तर अपलोड गर्न सकेको खण्डमा राम्रो कमाई गर्ने माध्यम वन्दछ भने युट्यूवको सोहि भिडियो व्लग तथा बेवसाईटमा राख्न मिल्ने हुदा प्रयोगकर्ता वढाउन सकिनुका साथै दोहोरो कमाई समेत गर्न सकिन्छ ।
– यो लेख अन्नपुर्ण पोष्टमा प्रकाशित भईसकेको छ ।
Aswin Deuja March 30, 2013 Log in to Reply
adsense account banaune site dinu na ?
SB Gautam March 30, 2013 Log in to Reply
Aswin ji , http://www.adsense.com log in garnu hola
thanks for feedback ! 🙂
Raj Eeb April 21, 2013 Log in to Reply
@Aswin Deuja ji,
you can try indyarocks, flixya, docstoc and many other to create adsense account without having website
हरिप्रसाद नेपाली July 3, 2013 Log in to Reply
but youtube maa add rakhne tarika post garnu na plz